BL စစ်စစ်ကြီးကိုမှ ကြည့်ချင်တဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ၂၀၂၀ နှစ်ဝက်ကစပြီး ထွက်လာနေခဲ့တဲ့ BL ၁၁ ကား | News Bar Myanmar
BL စစ်စစ်ကြီးကိုမှ ကြည့်ချင်တဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ၂၀၂၀ နှစ်ဝက်ကစပြီး ထွက်လာနေခဲ့တဲ့ BL ၁၁ ကား
အတိတ်တုန်းက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ရင် မင်းသား နဲ့ မင်းသမီး ချစ်ကြပြီး Happy Ending ဖြစ်တဲ့အခါ သိပ်ကို ကျေနပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အခု တဖြည်းဖြည်းပွင့်လင်းမြင်သာလာတဲ့ခေတ်ရောက်လာတော့ ပုံမှန် Romance ကားတွေအပြင် Bromance လို့ခေါ်တဲ့ မင်းသားနှစ်ယောက်ကြားက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သံယောဇဥ်မေတ္တာအကြောင်းကို ရိုက်ကူးလာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အများအပြား ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
ဒီလို Bromance ထဲ ပိုပြီး ကြမ်းတာကတော့ BL လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းအနုပညာလောကမှာတော့ မင်းသားနှစ်ယောက်ကြားက အချစ်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရိုက်ပြထားတဲ့ BL ကားတွေ အများအပြားရိုက်ကူးလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားကြတာပါ။ အခု ၂၀၂၀ အစောပိုင်းတုန်းက BL Series တွေကြည့်ပြီး အမှောင်လောကထဲကမထွက်နိုင်သေးတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် အခု ၂၀၂၀ နှစ်ဝက်နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ နာမည်ကြီး BL Series တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Love By Chance Season 2
2. My Gear And Your Gown
4. Manner of Death
5. My Ride The Series
6. My Bromance2The Series:5Years Later
10. TharnType:7Years of Love
11. Gen Y the Series
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ Series တွေအနက် တစ်ချို့က ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးဖြစ်သလို တစ်ချို့ကလည်း လတ်တလောမှာ ပြသနေပြီး ပရိသတ်ကြားမှာ နာမည်ကြီးရေပန်းစားနေပါတယ်။ Bromance လောက်ကို ရင်မခုန်တတ်တဲ့ မမတွေအဖို့ BL ကားတွေကို တစ်ဝကြီးကြည့်နိုင်ဖို့ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Next ဆိုရခက်တဲ့ High note ကို အသာလေးသီဆိုနိုင်တဲ့ Kpop Idol (5)ယောက် »
Previous « လကမ္ဘာကိုပါ အလည်သွားရတော့မယ့် EXO နဲ့ GOT7 တို့ရဲ့ သီချင်းများ